Maamulka Gobolka Hiiraan oo codsaday in gacan lagu siiyo xalinta colaadda gobolka – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Hiiraan oo codsaday in gacan lagu siiyo xalinta colaadda gobolka
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday dowladda iyo bulshada ku nool gobolkaasi inay ka qeyb qaataan sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexeysa dadka walaalaha ah ee dhawaan ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan.
Mudane Cabdifataax Xasan Afrax oo ka hadlayay munaasabad soo dhaweyn ah oo shalay degmada Beladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan loogu sameeyay wafdiga Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo socdaal gaaban ku tegay Beladweyne.
“Waxaan idinka codsaneynaa in aad gacan nagu siisaan sidii loo soo afmeeri lahaa colaadda ka taagan gobolka, anagu kan maamul ahaan waan ku dadaaleynaa xalinta arrintaasi, balse markasta ma idinkaga maarano in aad nagu garab gashaan sidii aysan arrintaasi markale u soo noqon lahayd” ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan.
Maalmihii ugu dambeeyay deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa hareeyay colaado soo noq noqday, kuwaasi oo ragaadiyay horumarka gobolka.
Madaxweyne Xasan oo ku baaqay in laga wada shaqeeyo dhismaha Maamul loo dhanyahay